Home राजनीति ओलि प्रचण्डले मेसो पाएनन मौका पाए मैले ५ वर्षमा मुलुक कायापलट गर्छु:...
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल (प्रचण्ड) ले भन्दा आफूले मुलुकका लागि कायापलट हुने गरी राम्रो काम गर्न सक्ने बताएका छन । यदी मैले मौका पाए भने आफूले पाँच-सात वर्षमा मुलुकमा विकासको काम सबै सम्पन्न हुने गरी काम गरेर देखाउने पौडेलले बताएका छन् ।
केपी ओली-प्रचण्डले त्यति काम गर्ने मेसो नपाएको पौडेलले दाबी पनि गरेका छन् । ओलि-प्रचण्डले काम गर्ने मेसो नपाएकै हो । मौका पाएँ भने उनीहरूले भन्दा मैले काम गर्न सक्छु। पाँच- सात वर्षमा यो मुलुक कायापलट हुन्छ, सामाजिक लोकतन्त्र अध्ययन केन्द्रले शनिबार गरेको कार्यक्रममा पौडेलले भने, कामको मेसो जान्नुपर्यो नि ! तिनीहरूलाई भन्दा काम गर्ने मेसो मलाई पो छ त ।
उनले ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल, बामदेव गौतमको भन्दा देशका लागि आफ्नो योगदान धेरै भएको पनि बताएका छन । मुलुकका लागि यी नेताहरूको योगदान कति छ ? उनले प्रश्न गरे, बरू मेरो योगदान धेरै नै रहेको छ । अहिलेसम्म जीवनमा कुनै जिम्मेवारी लिएको ठाउँमा म चुकेको छु ?
३० वर्ष पञ्चायतसँगको लडाइँमा म कतै झुकेँको थिए ? आफ्नो विचार थुन्न आफूलाई १४ वर्ष जेलमा थुनिएको प्रसंग निकाल्दै पौडेलले थपे, केपी ओलीलाई जस्तो ज्यान मुद्दामा मलाई जेल राखेको भने होइन । म आस्थाको बन्दी हो । आस्था र सिद्धान्तका लागि जेल बसेको थिए म ।
यिनीहरूसँग म किन झुक्ने ? नैतिक र राजनीतिक रूपमा केपी ओली-प्रचण्डसँग फेस गर्ने हिम्मत आफूसँग रहेको पौडेलले बताएका छन् । देशलाई निकास दिन सक्ने क्षमता मसँग मात्र छ, उनले भने, कम्युनिष्टले केहि गर्न सकेनन् यत्रो मौका पाउदा नि । अब कांग्रेसले केहि गर्न सक्छ भन्ने सन्देश १४ औं महाधिवेशनबाट दिनुपर्छ ।
Previous articleसरकारले मात्र सीमाको रक्षा गर्न सक्दैन : गृहमन्त्री रामबहादुर थापा
Next articleतिन क्याप्टेनको दादागिरी, निर्घात कुटिए सैनिक जवान – Hungama Khabar